सबै मधेसी पार्टी लाई एउटै पार्टी किन नबनाउने? यस प्रश्न को जवाफ कोही एक जना मधेसी नेता सँग पनि छैन। सबै मधेसी सबै थारु सबै जनजाति पार्टी हरु लाई एउटै एकीकृत पार्टी बनाउनु पर्छ। होइन भने यी नेता इमान्दार छैन कॉज प्रति भन्ने हुन्छ। जनता सँग बलिदान माग्ने, रगत पसीना माग्ने, आफु जाबो पार्टी एकीकरण गर्न नसक्ने? एजेंडा एउटै छ फोटोकॉपी सेम टु सेम। जनताले नबुझ्नु स्वाभाविक हो यिनी हरु किन एक हुँदैनन् भन्ने कुरा।